स्मार्टफोनमा चिनियाँ दबदबा, एप्पल र सामसुङको बजार गुम्दै - Jhilko
काठमाडौं । विश्वमै उदय अर्थतन्त्रमा रहेको चीनले अहिले इलेक्ट्रोनिक ब्यापारमा समेत ब्यापक सफलता हासिल गर्न सफल भएको छ । चिनियाँ इलेक्ट्रोकि सामानले अहिले विश्वमै आफ्नो दवदवा राख्न सफल भएको छ, दवदवा मात्र होइन विश्वमै अब्बल ठहरिएको एप्पर र सामसङ जस्ता कम्पनीहरुलाई राम्रैसँग टक्कर दिईरहेको देखिन्छ । सस्तो मूल्यमा उस्तै फिचर भएपछि किन महंगो मोवाइल बोक्ने भन्ने तन्नेरी पुस्ता अहिले चिनियाँ मोवाइलमा आकर्षित भएका देखिन्छन्, सस्ता मात्र होइन गुणस्तरीय सामान अहिले आम उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सफल भएका छ । विशेषगरी चिनियाँ मोबाइल फोनको आकर्षण र प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । यसले विश्व बजारमा चिनियाँ स्मार्ट फोनको व्यापार हिस्सालाई पनि वृद्धि गरिदिएको छ । बजार हिस्साका आधारमा विश्वका प्रमुख १० स्मार्ट फोन कम्पनीमध्ये ६ वटा कम्पनीहरुमा चिनियाँ रहेको देखिएवाट स्मार्ट मोवाइल फोनमा चिनियाँ प्रभुत्व विश्व बजारमा बढ्दै गएको देखिन्छ । चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनीको उदयले सामसुङ र एप्पलको व्यापार भने क्रमशः घट्दै गएको देखिएको हो । विश्व बजारमा टप टेन भित्र पर्न सफल स्मार्ट फोनहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१. सामसुङ मोवाइल :
सामसुङ स्मार्टफोनको दुनियाँमा पहिलो स्थानमा रहेको छ । व्यापारमा अघिल्लो वर्ष भन्दा ८५ गिरावट आएपनि दक्षिण कोरियाली कम्पनी पहिलो स्थानमा नै रहन सफल भएको छ । २०१८ को अन्त्यसम्म सामसङको विश्व स्मार्टफोन बजारमा १९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । सामसुङ मोवाइल सस्ता मोवाइल देखि विश्वकै महंगो र नयाँ टेक्नोलोजीमा आधारित रहेर विश्वभर आफ्नो उपस्थित जनाएको छ । पछिल्लो समयमा फोल्डिङ्ग गर्न मिल्ने फाइब जी स्मार्ट फोन लन्च गरेको छ । उक्त स्मार्टफोनमा एकै पटक तीनवटा आईओएस मार्फत प्रोग्रामहरु चलाउन सकिन्छ ।
२. एप्पल मोवाइल:
सन् २०१८ को अन्त्यसम्म आउँदा आइफोन निर्माता कम्पनीको बजार हिस्सा १४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष (२०१७) भन्दा एप्पलको हिस्सामा ४ प्रतिशत गिरावट आएको छ । कुनै बेला एप्पल कम्पनीको स्मार्टफोन बोक्नेको पहिचान नै बेग्लै हुने अनुभुत हुन्थ्यो, तर अन्य मोवाइलको तुलनामा महंगो र आईओएस चलाउन समेत त्यती सहज नहुने भएकोले एप्पल स्मार्टफोनका प्रयोगकर्ता विस्तारै घट्न थालेका हुन् । चीन लगायत दक्षिण एसियाली बजारमा एप्पल फोनको बजार घट्दो क्रममा रहेको छ ।
३. हुवावे मोवाइल:
हुवावे तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यो चिनियाँ स्मार्टफोन ब्रान्डले १४ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । यस कम्पनीको बजार हिस्सा गत वर्ष भन्दा ३४ प्रतिशत ले धेरै हो । हुवावे कम्पनीका संचालक नै क्यानेडामा गिरफ्तारीमा परेपछि अब भने केही बजार घट्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपी चीन र अमेरिका विच चलिरहेको ब्यापार युद्धले हुवावे मोवाइलको विक्रीलाई प्रभावित पार्न सक्छ । हुवावे विश्वमै सस्तो र राम्रो टेक्नोलोजी भएको कम्पनीमा दर्ज भएको छ ।
४. सिओमि मोवाइल :
चौथो स्थाममा रहेको सिओमिले स्मार्टफोन दुनियाँमा ८ प्रतिशत ब्यापार ओगटेको छ । कम्पनी गत वर्ष भन्दा २०१८ मा २६ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको हो । चिनीया बजारमा सिओमी फोनहरु लोकप्रिय रहेका छन् ।
५. ओप्पो मोवाइल :
विश्वमै आक्रामक ब्यापार गरिरहेको ओप्पो मोवाइल फोन विश्व बजारको पाचौं स्थानमा रहेका छ । ओप्पोले स्मार्टफोनले विश्व बजारमा ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा ओप्पो मोवाइल लोकप्रिय भईसकेको छ । ओप्पोले मुख्यत अहिले ब्यापार प्रबद्र्धनमा जोड दिएको देखिन्छ ।
६.भिबो मोवाइल :
ओप्पोको सिस्टर कम्पनी भिबो ७५ बजार हिस्सासहित छैटौं नम्बरमा रहेको छ । ओप्पो, वान प्लस र भिबो एउटै प्यारेन्ट कम्पनी अन्तर्गतका कम्पनीहरु हुन् । भिबो स्मार्टफोनले गत वर्ष भन्दा ३प्रतशित वृद्धि हासिल गरेको छ ।
७. एलजी मोवाइल :
स्मार्टफोन बजारको ३ प्रतिशत ओगटेको एलजी स्मार्टफोनले सातौं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष भन्दा २०१८ मा यस फोन कम्पनीको बजारमा २६ प्रतिशत गिरावट आएको छ ।
८. लेनोभो (मटोरोला ) :
चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी लेनोभो आठौं स्थानमा रहेको छ । सन् २०१८ सम्म आउँदा लेनोभोले ३ प्रतिशत विश्व बजार ओगटेको छ । लेनोभो स्मार्टफोनको बजार हिस्सा अघिल्लो वर्ष भन्दा २३ प्रतिशत कम भएको छ ।
९. नोकिया मोवाइल :
सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै फाइदा नोकिया निर्माता कम्पनी एचएमडी ग्लोबललाई भएको थियो । नोकियाको बिक्री अघिल्लो वर्ष भन्दा १२६ प्रतिशतले धेरै भएपछि यसको बजार हिस्सा १ प्रतिशत पुगेको छ । कुनै जमानामा विश्वभर लोकप्रियता कमाएको नोकिया मोवाइल स्मार्टफोन टेक्नोलोजीमा भने निकै पछाडी रहेतापनि पुनः ब्युँतिएको छ ।
१०. टेक्नो मोवाइल :
टेक्नो अर्को चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी हो । यसले सन् २०१७ मा भन्दा ३२ प्रतिशतले बजार विस्तार गरेको छ । २०१८ मा यसको विश्वबजार हिस्सा १ प्रतिशत रहेको छ । टेक्नो मोवाइलको बजार हिस्सा दशौं स्थानमा पर्न सफल भएको छ ।